एक सर्वेक्षणकर्ता हुनु जीवन भरको लागि अनुभव हो - Geofumadas
एक सर्वेक्टर हुनु एक आजीवन अनुभव हो।
जुन, 2014 topografia
केन अल्रेडको टोपोग्राफीको प्रेमको कुनै सीमा छैन, र उनको उत्साह, एउटा अध्ययनको लागि जुन नविकरण गर्नेहरूलाई एक गणितीय समीकरणको रूपमा देखा पर्दछ, संक्रामक हो।
सेवानिवृत्त सेन्ट अल्बर्ट एमएलएले एकपटक आफ्नो साधारण स्थल जग्गामा ल्याएपछि शक्ति सर्वेक्षणकर्ताहरूले औंल्याउनको बारेमा दुई पटक सोच्दैनन्। अझै सयौं वर्ष पछि, यी माइलस्टोनहरू जीवनकालिक मार्कर मानिन्छ। टोपोग्राफिक स्मारकहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू परिभाषित गर्दछ, तर सानो तहमा, तिनीहरूले प्रत्येक पार्सल मालिकको सम्पत्ति सीमा परिभाषित गर्छन्। यसको महत्त्व पहिलो पटकमा मिल्छ कि मानिसहरू जमिनको एउटा टुक्रामा उभिए र प्रत्येक चट्टानको स्वामित्व कसको छ भनेर बहस गर्न थाले।
«मा काम गर्दछ ट्राफोग्राफरहरूको महत्त्व यो बाइबलमा पाउन सकिन्छ, व्यवस्थाको पुरानो नियम पुस्तक, जहाँ जमीनको सम्पत्ति मानिन्छ। क्यानाडाली अन्वेषकहरू जस्तै शमूएल डि चम्प्लाइन वा जैक कार्टियर वास्तवमै सर्वेक्षणकर्ता थिए जसले तटवर्ती नक्शा सिर्जना गरिरहेका थिए। आधुनिक नगरपालिकाहरूमा सम्पत्तीको निश्चित सीमाहरू जहाँ यो परिभाषित गरिएको छ कि कसले यस जमिनको स्वामित्व लिन्छ र त्यसमा केहि पनि, स्थलाकृतिले निर्धारण गर्छ, "ओलरेड भन्छन्।
टोपोग्राफीको साथ उनको आकर्षण 50 वर्ष पहिले एक छुट्टी नौकरी संग, गर्मी को समयमा, अलबर्टा विश्वविद्यालय मा ईन्जिनियरिङ् को अध्ययन गर्दा।
“यो ईन्जिनियरि students विद्यार्थीहरूको लागि एक आवश्यक कोर्स थियो। म वाटरटन राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तरी सीमामा काम गर्ने सर्वेक्षणकर्ताहरूको टोलीसँग थिएँ। मैले ओटावाका एक सर्वेक्षणकर्तालाई आउँदै गरेको र काठको मर्मतको एउटा ट्रेल भेट्टाए जुन सीमा मार्करको रूपमा सेवा गर्‍यो। यस तथ्यले मलाई उत्साहित तुल्यायो, किनभने मैले बुझें कि एक सर्वेक्षणकर्ता बन्न तपाईं जासूसको अंश हुनुपर्छ ”Allred भन्छ।
यद्यपि प्रायः सेन्ट अल्बर्टका बासिन्दाहरूले शहरको परिषद र अल्बर्टा विधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो राजनीतिक टिप्पणीहरूको लागि एन्ट्रेड गरेका थिए, त्यस गर्मीपछि जलविद्युत् आयोजनामा ​​एलेड एक सरकारी सर्वेक्षक बनेका थिए र उनको पहिलो थियो। व्यावसायिक व्यवसाय
यस विषयमा उनको रुचि यति शोषक भयो कि, एक शौकको रूपमा, उनले स्थलाकृति इतिहासमा अध्ययन गरे। ओलरेडले आफ्ना धेरै निःशुल्क घण्टाहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाको मेसन-डिक्सन लाइनको -०० वर्ष पुरानो स्मारक वा स्लाइ सीमाको रूपमा खोज्न लगाए जुन अझै नील नदीको असवान बाँधको नजिक रहेको छ। यो पुरानो मिश्रीहरूले चट्टानमा काटिदिए।
"ती ती प्राचीन मार्करहरू कलाको काम हुन्," बाबेलियन स्मारकको एक प्रतिलिपि सहित हामीलाई प्राचीन स्मारकहरूको फोटो देखाउँदा एलेड्रे भन्छन्।
1700 एसीमा रहेको क्यासाइट अवधिको बाबिलोन पत्थर पुरानो शिलालेखको साथ हाइलाइट गरिएको छ जसलाई जमीनको मालिक भनिन्छ र यो वस्तु सीमा विवादको समाधान थियो।
"यो सर्वेक्षणकर्ता छन् र आफ्नो साथीहरूको विरुद्ध छिमेकीहरूको दावी को हल गर्न को लागी सीमा को सीमा को महत्व को भूमिका को दर्शाता छ," उनले भन्छन्।
स्थलाकृति को लागि औंठाको सामान्य नियम स्मारक राजा हो। यो नियम एक हो जुन सबै सीमा विवादमा अडिग रहन्छ।
अभिव्यक्त आदेशहरू वा लिखित कागजातहरूसँग सर्भेयरको ल्यान्डमार्क जत्तिकै शक्ति छैन। वास्तविक निर्णयले पनि भूमिमा साँचो लाइन स्थापित गर्दैन जसले स one्केत गर्दछ जहाँ एकको सम्पत्ति शुरू हुन्छ र अर्कोको अन्त्य हुन्छ।
उदाहरणका लागि मेसन-डिक्सन लाइनको सन्दर्भमा १ the०० को तर्कको मापदण्ड यो थियो कि इ England्ल्याण्डका राजाले विलियम पेनको जग्गाको स्वामित्व the० औं समानान्तरको आधारमा स्थापित गरेका थिए। तथापि, मौलिक सर्वेक्षण गरिएको थिएन। त्यो एक मा स्थित थियो।
तथापि, जब सीमा निर्णय अदालत को सबै तरिका गयो, मूल विद्रोह मा स्थापित अंक बनाए राखयो। यसको पृष्ठभूमिमा माईन-डिक्सन टोपोग्राफिक सर्वेक्षणमा परिभाषित रेखामा आधारित, फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनियामा स्थित थियो र मेरैरील्याण्डमा होइन।
"एउटै सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको लागि सही छ, जस्तै 49 समानांतर," Allred भन्छन्। "क्यानाडा - उत्तर अमेरिकी सीमा 49 समानांतरमा अवस्थित छैन।"
आफ्नो घरको नजिकै १ 1861 XNUMX१ मा पुजारी अल्बर्ट लाकोम्बेले सेन्ट अल्बर्टको जमिनका पहिलो बासिन्दाहरूलाई यहाँ दिए जुन क्वेबेक पद्धतिमा आधारित नदीको छेउछाउको क्षेत्रहरूको चिह्न प्रणाली थियो। प्रत्येक उपनिवेशकर्ताले नदी स्टर्जनले धुलाएको जमिनको एक साँघुरो पट्टी प्राप्त गर्‍यो।
१ 1869 XNUMX In मा, मेजर वेबब नामक एक सर्वेक्षणकर्ता क्यानाडा सरकारले मनिटोबाको लाल नदी बस्तीमा रहेको रिपियन क्षेत्रहरू सर्वेक्षण गर्न पठाइयो, जमिन मापनको बहुभुज क्षेत्र विधि प्रयोग गरेर। लुइस रीलले मेजर वेबको सर्वेक्षण प्रक्रिया समीक्षा गर्‍यो र यसलाई रोकियो।
एल्ल्रिडले चित्रकारी चित्रण गर्ने कलाकार लुई लुभोको सेन्ट अल्बर्टको उपाधि दिए जुन यस ऐतिहासिक क्षणलाई चित्रण गर्दछ।
"जब रीयलले सर्वेक्षण प्रक्रियाको त्यो क्रमलाई रोके, यसले पश्चिमी क्यानाडाको भूगोल परिवर्तन गर्‍यो," Allred भन्छ।
मनिटोबामा गरिएको सर्वेक्षणमा प्रयोग गरिएको विधिको मार्केटिंग थियो। अमेरिकी सीमाको उत्तरमा बसोबास गर्नेहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रयासमा वेबले 800०० एकड जमिन जम्मा गर्नु आवश्यक थियो। अमेरिकीहरूले communities०० एकड क्षेत्र मा आफ्नो समुदाय बनाए।
"उनीहरूले अमेरिकीहरूलाई भन्दा अधिक भूमि प्रदान गरेर बसेर आकर्षित गर्न प्रयास गरे।"
रिपेरियन पार्सल प्रणाली सेन्ट अल्बर्टमा पनि समस्या भयो। सन्‌ १ 1877 Chief मा, मुख्य निरीक्षक एम। डीनको नेतृत्वमा पाँच सर्वेक्षणकर्ताहरू एडमन्टनबाट सेन्ट अल्बर्ट पठाइए।
"सेन्जेस्टो बसन्तहरूले सर्वेक्षण टोलीको कामको विरोध गरे किनभने संघीय सरकारले भूमिलाई विभाजन गर्न चाहान्यो", जेन लीयूले अब सेवानिवृत्त विरासत संग्रहालयमा प्रदर्शनी संयोजकलाई भने, जसले सेन्ट अल्बर्टमा शीर्ष भौगोलिक समस्या अनुसन्धान गरेको छ।
“समस्याको एउटा पक्ष यो थियो कि मेस्टेजहरूले आधिकारिक रूपमा सञ्चय गरेका थिएनन्। तिनीहरूसँग आधिकारिक मूल्य बिना कागजातहरू मात्र थिए। सेन्ट अल्बर्टमा मेस्टीजो बसोबास गर्नेहरूले धम्की दिए कि यदि नदीको किनारमा पार्सलिंग विधि परिवर्तन गरियो भने जसले ओब्लेट र फादर लेडुकलाई हस्तक्षेप गर्न बाध्य तुल्यायो। "
मेस्टीजो बसोबास गर्नेहरूले शहरको लागि सम्भावित जग्गा वितरण प्रणाली बनाउनको लागि डीन र उसको टोली सेन्ट अल्बर्टलाई मापन गरे र उनीहरू डराउन थाले किनकि उनीहरूले जग्गाको अधिकार गुमाउनुपर्ला भन्ने डर थियो। यदि यसलाई पुन: नाप्यो भने उपनिवेशवादीहरूले भने कि कम्तिमा सात परिवारले जग्गाको यही भाग पाउनेछन्। केही बसोबास गर्नेहरूले नदीमा आफ्नो पहुँच गुमाउने छन् जुन कृषि र माछा मार्ने कामको लागि आवश्यक थियो। सबै सडकहरू, जुन योसँग समानान्तर थियो, परिवर्तन गर्नु पर्ने थियो।
“सरकारले यसको पाठ सिकेन। उनले मनिटोबामा के भयो भनेर सिकेनन र यसले सस्काचेवानको बटोचेमा समस्या खडा ग .्यो।
समानांतर मा, सेन्ट अल्बर्ट को mestizo settlers आधिकारिक शीर्षोग्राफिक सर्वेक्षण प्रणाली को स्वागत गरे किनभने Oblate पिताहरु को अनौपचारिक वितरण प्रणाली धेरै असहमति ल्याइयो।
स्थानीय इतिहास पुस्तक ब्ल्याक रोब्स भिजनका अनुसार जग्गा दाबीहरू हरेक दिनको कुरा हुन्थे। नयाँ बसोवासकर्ताहरूले केवल आफ्नो सम्पत्ती को प्रत्येक छोर मा एक हिस्सेदारी राख्दछन्।
सरकारी सर्वेक्षणकर्ताहरूको उपस्थिति यो मुद्दाले ल्याएको थियो र सार्वजनिक बैठक सन्ट अल्बर्टमा आयोजित भएको थियो जसमा अन्य नदीका समुदायहरूले फोर्ट सस्केचेवान र एडमन्टन सहितका मानिसहरू पनि सहभागी थिए। नींवहरु उठाए गए र पिता लेडेक र डैनियल मालनी, सेन्ट अल्बर्ट को एक निवासी, सेटावा को मामला को अपील गर्न को लागि पठाइएको थियो, सेन्ट अल्बर्ट मा नदी उपजीव को बनाए राखन को प्रणाली को बनाए। तिनीहरू सफल थिए, र नतिजाको रूपमा हालको पार्सल प्रणाली राखिएको थियो।
"शहरको बढ्दो रूपमा, नुनले आफ्नो देश बेचे र यो उपजीवित भयो। जब शहर विस्तार भयो, नदीबेड स्वामित्व गर्नेहरूले आफ्नो सम्पत्ति बेचे; यी वर्गहरू हामी अहिले अहिले सेन्ट अल्बर्टमा बेचेको थियो, "लिई ले भन्यो।
सर्वेक्षणकर्ताहरु द्वारा राखिएको पुरानो स्थलहरु निश्चित स्थलहरु बनेका छन् तर पत्ता लगाउन सजिलो छैन।
जब पानी उठ्छ वा बिउँझिन्छ, बिग झीलको अवस्थामा भने, सीमाहरू अझै पनि स्थापित गर्न आवश्यक छ। र यदि वनस्पति स्थल चिन्हमा बढ्छ भने, यी खोजी गर्न समानै गाह्रो हुन सक्छ।
«सर्भरको सबैभन्दा बहुमूल्य उपकरण मोटवल हो। कहिलेकाहिँ सर्वेक्षकहरू खुसी हुँदैछन् र एक ठुलो सर्कल जहाँ खोज्ने माउन्टस्टोन विघटन भएको छ खोज्दै तर यसको द्वारा छोडिने मोल्डको अस्तित्वमा पर्याप्त छ, "एलाइड भन्छन्।
ल्यान्डमार्कहरू पत्ता लगाउन कठिनाईको वर्णन गर्न, एलेडले एउटा कार्यक्रमलाई सर्वेक्षणको सर्वेक्षणमा चिन्हको रूपमा सेवा गरिरहेको छ र यो R-4 को रूपमा लेबल गरिएको थियो; यो ठूलो झील नजिकैको व्हाइट स्पुज वनको मध्यमा स्थित छ।
"यो मूलतः सम्भवतः एक रिपियन पार्सलसँग मार्कर थियो," उनले भने।
मार्कर हालै एक स्टेक हो जुन रातो प्लास्टिक सर्भेयरको टेप शीर्षमा जोडिएको छ। जब अल्रेडले पात र मलबेस हटाए, उनले मूल फलामका मार्कर भेट्टाए। वरपरका क्षेत्रमा, उसले जमिनमा उथलपुथल पनि देख्यो।
«म अब एक अवसाद खोज्न सक्छु, तर एक रिपायन सडकको पार्सलको लागि त्यहाँ 12 इन्चको चार अवरोध गहिरो र 18 वर्ग सेन्टमिटरको क्षेत्रमा हुनुपर्छ। किसानहरूले किसानहरूलाई नचाहनेको लागि थप मार्कर थिए र यसका कारण मार्कर गुमाउन सक्छन्, "उनले बताए।
एलेड उन प्रारम्भिक अन्वेषकहरु को काम मा मार्छ जो डेविड थिम्पसन जस्तै अज्ञात विद्रोहहरु लाई अक्सर देश को सबै भन्दा असुरक्षित इलाकों मा र सबै चरम जलवायु परिस्थितियों को अधीन गरे।
«सर्वेस्टर अग्रगामीहरू हुन्। थिम्पसनको अवस्थामा, ताराहरू अवलोकन गरेर यो पूर्णतया पूरा कार्य थियो। त्यहाँको कुनै अर्को बिन्दुको सन्दर्भ थिएन, "एलेड्रे भन्छन्।
ऊ बोरिंग बन्ने सर्वेक्षणको विचारमा मजाकले मोज गर्छ।
"धेरै भूमिको विशेषताहरूमा निर्भर गर्दछ र यसको प्रत्येक टुक्रासँग सीमा छ," उनले भन्छिन्।
"सर्वेयर ट्राइगोनमेट्रीमा राम्रो हुनुपर्छ; तिनीहरू कानुनी प्रणालीहरू र कला र नक्साका साथ साथै भौगोलिक क्षेत्रमा बुझ्न राम्रो हुनुपर्दछ। तिनीहरूलाई जान्नु अघि के अस्तित्वमा छ। टोपोग्राफी इतिहास छ »।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो शीर्ष 40 ज्योतिषियल ट्विटर
अर्को पोस्ट पोइन्ट क्लाउड र गुगल नक्साको साथ समिकरण - What's माइक्रोस्टेशन V5i मा नयाँ के छअर्को »
Rep जवाफ "सर्भेयर हुनु जीवनभरको लागि अनुभव हो"
सी। मार्शल भन्छिन्:
दिलचस्प !!!!!!!! के तिनीहरूले मेक्सिकोको टोपोग्राफीको इतिहास पाउनेछन्? नमस्कार!
फ्रान्सेस्को जाभेर बर्लिन डे ला क्रुज भन्छिन्:
यो यस देश मा प्रोफेसरलाइज गर्न को लागी निवेश गर्न को लागी छ यो यति रुचि छ र सहिफेक्ट्स को पूर्ण, यो वा अन्य विषयहरु मा एक भिडियो।
इतिहास भरिएको एक प्रकाशन जुन टोपोग्राफरको महत्त्व प्रतिबिम्बित गर्दछ
एलेक्ससन महल देखि भन्छिन्: